Oromo Free Speech: Seenaa Obbo Araarsoo Boruu (1952 – 2015)
(Oromedia, 16 Amajjii 2015) Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa, arra, sadarkaa if duuba hin deebine geeysee jirti. Akkanumaa waliin, bahaa-bu’ii amna isii keessatti warra dhaabbiin rooraatuu fii kanneen Xophiyummaan a’oo seente jidduu, lammii keessaa, kanneen galii isii irraa shakkii qaban heddu. Garuu, yo kan durin wal cinaa qabame, lakkooysi warra kanaa akkaan xiqqa.
Gaafa jeeynoonni armaa olitti maqaan dhawame, kaayoo bilisummaa tiif wareegama barbaachisu kennuuf muratanii daggala Oromiyaa seenan, kaayoo deemaniin bowwaasuu fii tumsa barbaachisuun warri bira dhaabbatan jibiri. Qoonni jara kanaa, babal’ina kaayoo bilisummaa tan gaafa qacalee tiif murteessa ture. Sadarakaa qabsoo tan gaafa kanaa keessatti, qabsaawota maqaan tarree duraatti tarrifamu keessaa tokko, Rabbi rahamata haa godhuu fii, Araarsoo Boruu (Ahmad Muussaa Haaji Alii Boruu) ti.Araarsoo, abbaa isaa Obboo Mussaa Haaji Alii Boruu tii fii haadha isaa Aadde Haloo (Halimaa) Aadamirraa Baha Oromiyaa, Godinaa Bareentumaa, magaalaa Dirree Dhawaa, duubbee Masgiid Jum’aa, naannoo maqaa akaakoo isaa tiin moggaafamuun, ganda Haaji Boruu-tti beekkamutti Caamsaa 10, bara 1952, dhalate.Gaafa sammuun Araarsoo barnoota fudhachuu geeyse, ijibbaata sirna gabrummaa dura dhaabbachuu, tan gaafa inni dhalte lammiin hordofaa turan irraan kan ka’e, akkuma daa’imman yaroo saniitti, mana barnoota Amaaraa (akka gaafas itti beekkamutti) irraa iggitamee, Amantii Islaamaa tii fii Arabii akka baratuuf, Madrasaa Gubee geeyfame. Madrasatti, Araarso, qu’annaa hifaata malee tiin, yaroo gabaabduu keessatti if bira dabree, warra waliin baratan gargaarutti seene. Xiqqo booda, san bira kutee, barachaa, manuma barnootaa sanitti, joollee barnootaan isaa gad jiran barsiisuu jalqabe. Barnoota madrasaa akka xumureen, guddaan, dheeraan, barnoota ammayyaa tiif, mana barnoota Madrasa Jadiidaa geeyfame. Araarso akkuma mana barnoota kaanitti, kanattiis, barnoota isaatti akkaan cime. Barnoota sadarkaa duraa booda kan jiddu galaa tiif mana barnoota Laga Harree-tti dabree, waliigala kutaa duraa, baroota gabaabotti keessa fullahee, kan lamadaatti tarkaanfate.
Araarsoo fii Faxxumeen, dhuma bara 1981, Somaalee keessatti irbuu jaarsaa jaartummaa waliif seenan. Eega gaafasii, hamtuu fii toltuu isaan mudattu mara jaalala namayyu hinaafsiftuun keessa hulluuqan. Akkuma wal-jaalatanitti wal jalaa hafuu didanii, Guulaa, Faayoo, Tiyyaa fii Leensaa biyya ambaa keessatti hadiyyomsanii, wal duraa duuba, deeman. Ilmaan isaanii malees, hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo garaa raasan. Rabbi jannataan haa qananiyu!
Posted by Oromo firee speech at 1:47 PM